टिका सानुको गुरु भेट्न राजु परियार जादा भाबुक भए खिम अविरल,राजु परियारले गरिदिने भए गीत रेकर्ड – Gazabkonews
टिका सानुको गुरु भेट्न राजु परियार जादा भाबुक भए खिम अविरल,राजु परियारले गरिदिने भए गीत रेकर्ड
दोहोरीबाट सबैको मन मुटुमा बसेकी गायिका हुन् टिका सानु।जसको गुरु खिम अविरल सबैको मन मुटुमा बसेका छन कारण उनको अबस्था निकै नाजुक मात्रै थिएन उनको आवाज पनि निकै मिठो थियो जस कारण उनि यो समय चर्चामा छन।सोहि बेला लोकप्रिय गायक राजु परियार केहि सहयोग बोकेर खिम बिश्वकर्मा भेट्न पुगेका छन।खिमको अबस्था देखेर निकै भाबुक बनेका राजु परियारले ठुलो सहयोग गरेर मात्रै फ़र्किएनन् छिट्टै गीत रेकर्ड गर्ने आस्वासन समेत दिए।
राजु परियारको जस्तै आवाज सुनिने खिमको अबस्था ऋणकै कारण नाजुक भएको हो।ठुलो ऋण बोकेर जीवनको लडाई लडिरहेका खिम अहिले पनि आफुले उक्त अबस्थालाई निरन्तरता दिएका छन।अब केहि दिनमै खिम इन्द्रेणी जाने भएका छन।उनको लागि इन्द्रेणीबाट पनि सहयोग आउने भएको छ भने इन्द्रेणीकि टिका सानुले पनि कृष्ण कंडेल संग सल्लाह गरि केहि दिनमै खिम बिक लाइ इन्द्रेणी लाने बताएकी छिन। खिमलाइ कलाकार बन्ने भूतले करोडौको ऋण बोकायो जसको कारण अबस्थाले अर्को रुप लिएको हो।अझै खिमलाई आस छ यो हालतबाट बाहिरिन सक्छु भन्ने यति मात्रै हैन इट्टा बोकेरै ऋण तिर्न सक्छु भन्ने आट सम्म गरेका रहेछन।हेरौ भिडियो :
तपाईलाई थाहा छ स;ह;वा;सका लागि सबैभन्दा उचित समय कुन ? महि;नामारीको बेलामा किन गरिँदैन ? कुन समयमा गर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ ? हेर्नुहोस् जानकारीमूलक यो भिडियो
लोग्शरी कुँवर=हिजो हिन्दु महिलाले पञ्चमी तिथि मनाए । ऋषिपञ्चमी पर्वलाई महिलाहरूको स्वास्थ्य, शुद्घता र सौन्दर्यबर्द्धक पर्वको रुपमा ब्याख्या गरिदै आएको पाईन्छ । रजस्वला हुन सुरु भएका महिलाहरुले आजको दिन व्रत बसेर पूजापाठ गर्‍यो भने पापबाट मुक्ति पाइने जनविश्वास छ । महिनावारी भएको बेलामा महिलाहरुले जानी नजानी अरुलाई छोएर गरेको ठूलो पापबाट छुटकारा पाउने एउटामात्र कडीको रुपमा पञ्चमीको व्रतलाई लिइन्छ ।पञ्चमी व्रतको पूजा उपासनामा अपामार्ग (एउटा बिरुवा) र माटो (विशेषगरी हात्तीले टेकेको) महत्वपूर्ण मान्छिन् । अपामार्ग दतिउनका लागि र माटो हात धुनमा प्रयोग गरिन्छ ।महिनावारी भएका बेलामा गरेका पाप पखाल्न पञ्चमी व्रत बस्ने परम्परासँगै हात्तीले टेकेको माटोले योनी र गुजद्वार सफा गरिन्छ । त्यस्तै तीन सय पैंसठीवटा ब्रस आकारका अपामार्गका टुक्राले दाँत माझिन्छ भने त्यसका पातहरु नुहाउनका लागि प्रयोग गरिन्छन् ।
आजको दिन नेपाल सरकारले महिला कर्मचारीहरुलाई बिदा समेत दिने गरेको छ । असोज ३ गते आउने भनिएको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको महिलाको हक सम्बन्धी धारा ४३ को उपधारा (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ र लैङ्गकि पहिचानको आधारमा भ्रूणहत्या गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनिएको छ ।त्यस्तै उपधारा (३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।तर बिडम्वना मान्नुपर्छ की, महिनावारी भएका बेलामा अरुलाई छोएर गरेको पापबाट मुक्ति दिलाउने उद्देश्यले राज्यले महिलाहरुलाई ब्रत बस्न सरकारी बिदाको व्यवस्था गर्छ । यो भनेको राज्यको मूल संविधानमा महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ भनि गरिएको कानुनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु हो ।
एकातिर महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनि कानुनी व्यवस्था गर्ने अनी अर्कोतिर त्यही कुरालाई संरक्षण गर्नका लागी सरकारी बिदा नै दिने ! यो कस्तो खालको व्यवस्था हो ? यो भनेको त महिनावारी हुनु पाप हो । महिनावारी भएकी महिलाले कसैलाई छुनु समेत हुँदैन भन्ने गलत मान्यतालाई प्रसय गर्ने काम होइन त ? यदी होइन भने किन राज्यलेनै महिनावारीलाई पापको रुपमा ब्याख्या गर्ने पञ्चमी व्रत बस्न महिलाहरुलाई पे्ररित गरिरहेको छ ? यो बहसको विषय हुनुपर्छ ।
मिथ्या कुरा=कुनै यूगमा मान्छेहरुलाई दाँत मुख सफा गर्नुपर्छ, नुहाउँनु पर्छ भन्ने लाग्नैथ्यो होला । अनि दाँत मुख सफा गर्ने बिरुवा अपामार्गको सहज उपलब्धता पनि थिएन होला । त्यसैले मान्छेहरुमा दाँत मुख सफा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन, अपामार्गको महत्व बुझाउन र महिलाहरुको संवेदनशील अंग मानिने योनी सफा राख्नुपर्छ भन्ने बुझाउनका लागि वर्षमा एक दिन यसो गर्न सिकाइएको हुन सक्छ, जुन एकदमै जायज थियो । यूग अनुकुल थियो ।किनकि आज हामी विज्ञानको यूगका मान्छे भनेर गर्व गर्नेहरु नै महिनावारी (प्राकृतिक नियम)को समयमा अरुलाई छुँदा पाप लाग्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौ । हाम्रो राज्य नै त्यसलाई आत्मसात गर्छ भने त्यो बेलाका जान्ने बुझ्ने भनिएका ऋषिमुनिहरुले वर्षमा एक दिन भए पनि यसो गर है भनेर सिकाएको कुरालाई गलत मान्नु मूर्खता बाहेक केही होइन ।
महिनावारी सुरु हुने झन्डै दुई हप्ताअघि डिम्बाशयबाट पाकेको डिम्ब गर्भाशयमा आइपुग्छ । डिम्बले डिम्बाशय छोडेपछि गर्भ रहँदैन । परिवार नियोजन गर्ने प्राकृतिक विधि अथवा क्यालेन्डर विधि अपनाउने ब्रहृमचारीहरूले यी दुई हप्ताको हिसाब राख्छन् ।तर, त्यो यूगमा पनि धर्तीमा सायद महिलाहरुमात्र अवश्य थिएनन् । यदी त्यसो हो भने दाँत मुख र गुप्ताङ्ग सफा गर्न किन महिलाहरुलाई मात्र प्रेरित गरियो होला ? के त्यतिबेलाका सबै पुरुषहरु यस्तो कुरामा पोख्त थिए होलान् त ? अनि वर्षभरि दाँत नमाझ्ने महिलाहरुलाई व्रत बसाएर एकै दिन (३६५ पटक) अपामार्गले दाँत मुख सफा गर्न, ३६३ पटक नै गुप्ताङ्ग सफा गर्न प्रेरित गर्ने ऋषिले त्यही कुरा पुरुषलाई चाँहि किन नसिकाएका होलान् ।के पुरुषहरुले दाँत मुख अनि गुप्ताङ्ग सफा नराख्दा पनि हुने हो त ? अवश्य होइन । यो महिलालाई आफ्नो सौन्दर्यमा सधै निखार ल्याइरहनुपर्छ र पुरुषलाई आफुतिर आर्कषिर्त गरिरहनु पर्छ भन्ने मान्यताको उपज हो । जब कि पुरुष पनि त महिलाको नजरमा सभ्य र शालीन हुनुपर्छ ।
देवीहरुको गोठ खोइ त ?=यदि महिनावारी हुनु पाप हो । यो बेलामा अरुलाई छुँदा पाप लाग्छ भने देवीहरुको रुपमा पूजिने सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सीता जस्ता धनवान, बुद्धिवान, बलवान, विद्यावान देवीहरु पनि त महिला थिए । उनीहरुको मूर्ती भएका मन्दिरहरु अनगिन्ती छन् । हामी तिनै मन्दिरमा पूजा गर्न जान्छौं । त्यहाँ जानलाई कुनै महिना, समय वा बारले छेकबार गर्दैन । अनि सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सीता महिलानै हुन् भए उनीहरु पनि त हरेक महिना महिनावारी हुन्छन् होला । खै त उनीहरु महिनावारी भएका बेलामा मन्दिर छोडेर बाहिर बसेको ? कथित धर्मका ब्याख्याताहरु किन मौन छन् यस बारेमा ?यदि महिनावारी भएको बेला महिलाहरु अछुत हुन्छन् भने देवीहरुको मन्दिर बनाउन लगाउनेहरुले उनीहरु महिनावारी हुँदा बस्ने ठाउँ -गोठ) बनाउन लगाउनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले महिनावारी हुनु प्राकृतिक नियम भए पनि महिनावारीको समयमा अरुलाई छुन हुँदैन, मठ मन्दिर जान हुँदैन, मीठो पोषिलो खान हुँदैन भन्ने मनगढन्ते कुरामात्र हो ।परापूर्वकालमा गरिवी, अशिक्षा र चेतनाको अभावमा महिनावारीको समयमा घरबाहिर राखेर कसैलाई छुन समेत नदिई आराम गर्न लगाएको कुराको सिको गर्न खोजेर अहिलेका आधुनिक भनिने मान्छेहरु पूर्वजको खिल्ली उडाउँदैछन् । जुन अत्यन्त चिन्ताको विषय हो ।
पाप होइन, प्राकृतिक नियम=हिन्दूहरूका समाजमा रजस्वला एउटा निषेधका रूपमा लिइन्छ । किशोरावस्था सुरु भएदेखि चालीस पैँतालीस वर्ष नपुगेका सबै महिलाहरूको महिनैपिच्छे परिपक्व भएका तर निषेचन नभएका दुइटा डिम्ब फुट्छन् र गर्भाशयबाट त्यही फुटेको डिम्व रक्तस्रावको रूपमा शरीर बाहिर तीन दिन निस्कन्छ । तिनै तीन दिन महिलालाई रजस्वला भन्छन् र नेपालीहरू महिनावारी वा नछुने भन्दछन् ।महिनावारी सुरु हुने झन्डै दुई हप्ताअघि डिम्बाशयबाट पाकेको डिम्ब गर्भाशयमा आइपुग्छ । डिम्बले डिम्बाशय छोडेपछि गर्भ रहँदैन । परिवार नियोजन गर्ने प्राकृतिक विधि अथवा क्यालेन्डर विधि अपनाउने ब्रहृमचारीहरूले यी दुई हप्ताको हिसाब राख्छन् । रजस्वला भएको तीन दिन पनि गर्भ रहँदैन, तर चौथो दिनदेखि झन्डै दुई हप्तासम्म नयाँ डिम्ब निषेचनका लागि तयार हुने हुनाले गर्भ रहन्छ ।सबै धर्महरू आधारभूत रूपमा सामाजिक न्याय वा अनुशासनका रूप हुन् ।
हिन्दु धर्मशास्त्रमा रजस्वला भएका तीन दिन सहवास निषेध गरिएको छ । रजस्वलालाई निषेध गरिएको मुख्य कुरो सहवास मात्र रहेछ । तर, यहाँ रजस्वला बारे भ्रम, लोकाचार र निषेधको संस्कृति जटिल बनेको छ ।महिनावारी नभई महिलाले सृष्टि नै गर्न सक्तैनन् । त्यसैले रजस्वला, गर्भिणी र सुत्केरी भएको अवस्था नै हरेक महिलाको सबभन्दा पवित्र अवस्था हो । अरू कुनै उपाय नलगाएर रजस्वलालाई नै सामाजिक बहिष्कार गर्नु कडा धार्मिक अन्याय हो । यदि महिनावारी हुनु पाप हो भने यसलाई पापको संज्ञा दिन सक्ने त्यीं व्यक्तिहरु पनि पापी हुनुपर्ने हो ।किनभने एउटा महिला महिनावारी हुनु भनेको उ आमा बन्न सक्षम भएको कुराको प्रमाण हो । त्यसैले जसले महिनावारी हुनुलाई पाप ठान्छ अथवा अछुतको व्यवहार गर्छ त्यो उसको अज्ञानताको पराकाष्टा हो । यदि मेरी आमा महिनावारी नभएको भए म कसरी यो धर्तीमा आइपुग्थें भन्ने कुराको हेक्का राख्न सके यस्ताखालका अन्धविश्वास स्वतः हटेर जाने निश्चित छ ।
‘मेरो श्रीमान् हो’ यि दुई दिदी बहिनीले एउटै पुरुषलाई के गरे यस्तो ?
एजेन्सी । एउटै पुरुषलाई दुई दिदी बहिनीले आफ्नो श्रीमान दावी गर्दै हंगामा गरेपछि प्रहरीहरु पनि असमन्जसमा परे । चार महिना देखि हराएका आफ्ना श्रीमान्लाई फेला पारेको दिदीले बताएकी थिइन् भने बहिनीले उनी आफ्नो श्रीमान् भएको दावी गरेकी थिइन् ।
दुई दिदी बहिनी एउटै पुरुषका लागि लडेको देखेर प्रहरी भने अचम्म परेको छ । यो समस्या सुल्झाउन प्रहरीलाई पनि हैरान भएको छ । यो घटना भारत उत्तराखंडको रुड़की सिभिल लाइन कोतवालीको हो । श्रीमती र प्रेमीकाको लफडामा परेका श्रीमान् भने चुपचाप प्रहरीका अगाडी बसीरहेका छन् ।
रुड़कीको पूर्वी अम्बरतालब नजिकै बस्ने प्रदीपको ६ बर्ष अघि मेरठको मवानामा विवाह भएको थियो। प्रदीपको विवाहित जीवनमा उनका चार छोरी थिए। चार महिना अघि प्रदीप अचानक आफ्नी साली नाता पर्ने युवती लिएर हराए ।
साली लिएर हराएपछि ससुरालीले उनी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । त्यसबेलादेखि प्रदीपकी श्रीमती र मवाना पुलिस उनको खोजी गर्दै थिए।
चार महिना पछि, २७ डिसेम्बरमा, प्रदीपकी श्रीमतीले उनलाई रुड़की बस स्ट्यान्डमा फेला पारिन् । त्यहाँ धेरै हंगामा मच्चियो। घटना सुल्झाउन तिनै जना सिभिल लाइनहरू कोतवाली स्थित प्रहरी कार्यालय पुगे ।
प्रदीपकी श्रीमतीको आरोप छ कि श्रीमानले आफ्नो बहिनीलाई फकाएर लिएर गयो । प्रदीपकी श्रीमती आफ्ना बच्चाहरूसँग माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् । प्रहरीले यो घटनामा अझै कुनै निर्णय लिइसकेको छैन ।
घरमा ताला लगाएर डाक्टर श्रीमान् भागे, १२ दिन देखि श्रीमती ढोका बाहिर भोकै
एजेन्सी । ११ बर्षसम्म, एक डाक्टरले नाबालिग केटीसँग सम्बन्ध राखे । घटना खुलेपछि दबाबमा परेर बिहे गरे। तर जब उनीहरुबीच सम्बन्ध राम्रो भएन युवतीलाई घरबाहिर निकालिदिए । घरमा साँचो लगाएर डाक्टर सम्पर्क विहिन भएका छन् । उनको श्रीमती १२ दिन देखि भोकै घर बाहिर धर्ना दिएर बसेकी छन् ।
यो घटना भारत राजस्थानको धोलपुर जिल्लाको हो। राजस्थानको धौलपुर जिल्लाको बेसेडी थाना क्षेत्रको गाउँमा डाक्टरको यस्तो कालो ब्यवहार सार्वजनिक भएको हो । करीव ११ बर्षदेखि डाक्टरले आफन्तको छोरीसंग सम्बन्ध राख्दै आएका थिए । त्यतीबेला ति युवती नाबालिग थिइन् । कानुनी कारवाही हुने डरले डाक्टरले विवाह त गरे तर उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो भएन ।
अहिले डाक्टरले अदालत मार्फत सम्बन्ध विच्छेदको नोटीस समेत पठाएको युवतीले बताएकी छन् । घटनाको बारेमा भारतीय मिडिया आजतकले समाचार बनाएपछि अहिले प्रहरी घटनास्थल पुगेर युवतीको उद्दार गरेको छ । उनलाई घर भित्र प्रवेश गराएको छ । । युवतीको नाम नेहो हो । नेहाले भनिन् कि उनको माइती बिसेडी थाना क्षेत्रको गाउँमा उनको आफन्त छन् । सन् २००६ मा उनी सोही आफन्तको घरमा गएकी थिइन् ।
डाक्टरको नाम उपेन्द्रले हो । उनी उत्तर प्रदेशको आग्रामा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका थिए । त्यती बेला देखि नै उपेन्द्रले नेहासंग सम्बन्ध राखे । त्यती बेला नेहा नाबालिग थिइन् । धेरै कठिनाई पछि, उपेन्द्रको २० डिसेम्बर २०१७ मा आर्य समाज फरीदाबादमा बिवाह गरे ।
विवाह गरेपछि उपेन्द्रले धोलपुरमा लगेर नेहालाई केही समय राखे । त्यसपछि उपेन्द्र आग्रा गए। अहिले उपेन्द्रले नेहालाई वास्ता गर्दैनन् । उपेन्द्रले अब अदालत मार्फत सम्बन्ध विच्छेदको सूचना पठाएका छन् । यो खबर थाहा पाएपछि उनी उपेन्द्रको घरमा आइन् । उनलाई डाक्टर उपेन्द्र र उनका परिवार मिलेर या त ना दिए । उनलाई घरवाट बाहिर निकालिदिए र आफुहरु सम्पर्क विहिन भए । नेहा सोही घरको ढोकामा १२ दिन देखि भोकै बसिरहेकी छन् ।
बिक्रमबाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन्, बाबाको दर्शनगरी पुष १९ देखि २५ गते सम्मको राशिफल हेर्नुहोस्
मेष : मध्यम खालको समय छ । कृषि एवं अन्नअनाजको व्यापारमा प्रगति हुनेछ । शैक्षिक काममा व्यस्तता बढ्नेछ । सवारी साधनको काममा लाभ हुनेछ । भ्रमणको गोचर रहेको छ । घर बाहिर घुमफिरमा समय खर्च होला। आर्थिक कारोबार बढ्नाले ऋणको भार कम हुनेछ । इष्टमित्रसँग नयाँ सम्बन्ध बन्नेछ । वैदेशिक काममा फाइदा एवम् यात्राको मजा मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने साथीसँग वैमनस्यता हुनेछ । शारीरिक कष्ट एवम् अनावश्यक खर्चले समस्या आउनेछ ।
वृष : यो साता मध्यम खालको छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने भएकाले ध्यान दिन जरुरी छ। पारिवारिक किचलो हुने सम्भावना छ । जग्गाजमिनको विवाद बढ्न सक्छ । साताको मध्यमा प्रेममा प्रगति एवम् भोग विलासमा खर्च हुनेछ । जग्गाजमिनबाट फाइदा एवम् नोकरी रोजगारीमा राहत मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने यात्राको सुख मिल्नेछ । दाजुभाइबाट सहयोग पाइने एवम् सन्तानको स्वास्थ्यमा भने समस्या आउने देखिन्छ ।
मिथुन : साताको सुरुमा केही समस्या देखिएको छ । घरबाहिरको काममा व्यस्तता बढ्नेछ । काममा जिम्मेवारी थपिनाले व्यक्तिगत काम पर सर्नेछ । नयाँ काममा लगानी बढ्नेछ । दाजुभाइबाट सहयोग मिल्नेछ । अचानक खर्च आउनाले सञ्चित धन कम हुनेछ । अनावश्यक लाञ्छना लाग्ने एवम् पेटको समस्या हुनेछ । साताको मध्यमा भने आपसी समझदारीमा विवाद टुंगिनेछ । साताको अन्त्यमा भने व्यापार व्यवसायमा फाइदा एवम् भोजनको सुख मिल्नेछ ।
कर्कट : धनको सवारी साधनामा लगानी बढ्नेछ । कारोबारमा आर्थिक लाभ मिल्नेछ । पशुचौपाया एवम् कृषिबाट आम्दानी मिल्नेछ । स्त्रिपक्षबाट सहयोग मिल्नाले काममा सहजता आउनेछ । साताको मध्यमा भने यात्रामा खर्च बढ्ने, अनावश्यक वादविवाद हुने एवम् स्वास्थ्यमा प्रतिकुलता देखिन्छ । साताको अन्त्यमा भने पारिवारिक भेटघाट हुने, नयाँ सरसामान प्राप्ति हुने योग रहेको छ ।
सिंह: स्वास्थ्यमा बाधा हुनेछ । मातृवर्गसँग वैमनस्यता बढ्नेछ । साथीभाइसँग रमाइलोमा खर्च बढ्नेछ । राजनीतिक पहुँच बढ्नेछ । बोली वचनले विवाद आउनेछ । रोजगारीमा भने प्रगति देखिन्छ । व्यापारमा प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा गडबडी एवम् अचानक खर्च हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने विदेशको काममा खर्च हुने, मनोरञ्जनमा संलग्न भइने एवम् अनावश्यक पैसा व्यय हुनेछ ।
कन्या: यात्रामा झन्झट बढ्नेछ । सरसामान हराउन सक्नेछ । धनको कारोबारमा अनावश्यक तनाव आउनेछ । काममा ढिलासुस्ती एवम् शारीरिक आलस्यता बढ्नेछ । धर्मकर्ममा रुचि जाने एवम् विदेशबाट मिठो खबर आउनेछ । ठूलाबडा व्यक्तिको सहयोग एवम् साथले काममा सहजता मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने आर्थिक भार कम हुने एवम सरकारीे काममा लाभ मिल्नेछ ।
तुला: कृषि एवम् पर्यटनबाट फाइदा हुनेछ । स्वास्थ्यले भने समस्या दिनेछ । पारिवारिक वैमनस्यता बढ्नाले काममा रुचि घट्नेछ । साताको मध्यमा भने वैदेशिक योग बन्ने एवम् अधुरा काममा राहत मिल्नेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्ने तथा सरसहयोगमा समय जानेछ । साताको अन्त्यमा भने काममा जस मिल्ने एवम् पदोन्नती तथा राम्रो अवसरको प्रस्ताव आउनेछ ।
वृश्चिक: राजनीतिमा अवसर मिल्नेछ । वैवाहिक कुराले साथ पाउनेछ । साझेदारीमा फाइदा मिल्ने तथा व्यावसायिक यात्रा हुनेछ । इष्टमित्रबाट सहयोग मिल्नाले काममा सहजता हुनेछ । साताको मध्यमा भने काममा रोकावट आउने तथा अपजसको भागिदार भइनेछ । साताको अन्त्यमा भने अधुरा काम बन्ने, धार्मिक यात्रा हुने तथा आफ्नो योजनामा खुशीको अवस्था आउनेछ ।
धनु: सामाजिक एवम् सामुहिक काममा सहभागिता बढ्नेछ । धर्ममा रुचि बढ्नेछ । विदेशको काम बन्नेछ । वादविवादमा परिन सकिनेछ । घरको कामभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी थपिनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुने तथा खेलकुदमा प्रगति मिल्नेछ । काममा आलोचना हुने तथा मातृपक्षको स्वास्थ्यमा गडबडी हुनेछ । व्यापारमा भने फाइदा मिल्ने तथा प्रेममा प्रगति हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने अचानक घाटा हुनेछ । शारीरिक अस्व्स्थता बढ्ने तथा थालनीको काममा रोकावट हुनेछ ।
मकर: साताको शुरुमा काममा वाधा आउनेछ स्वास्थ्यमा समस्या हुनेछ । प्रेममा अनावस्यक शंका बढ्नाले काममा वाधा पर्नेछ । साताको मध्यमा आम्दानीको स्तर बढ्नाले पुराना काम पुरा हुनेछन् । स्वास्थ्यमा सुधार आउनुका साथै विरोधी पक्षको भय हट्नेछ । मुद्दामामिलामा राहत मिल्ने एवम् कला, संगीत र सामाजिक कार्यमा प्रगति देखिन्छ । साताको अन्त्यमा भने यात्राको योग बन्नेछ। पारिवारिक भेटघाट रहने एवम वैवाहिक प्रसंग आउनेछ ।
कुम्भ( साथीभाइसँग रमाइलोमा खर्च बढ्नेछ । नयाँ ठाउँमा यात्राको अवसर मिल्नेछ । घरायसी कुरामा विवाद आउनेछ । सरसल्लाह नमिल्नाले काममा बोझ पर्नेछ । जग्गाजमिनमा विवाद आउनुका साथै आफन्तबाटै असहयोग आउनेछ । साताको मध्यमा भने विद्यामा प्रगति हुने, सन्तानबाट खुशीयाली मिल्ने र आम्दानीको स्तर बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा भने घरबाहिर रहनुपर्ने एवम् खेलकुदमा प्रगति हुनेछ ।
मीन: अनावस्यक वादविवादमा परिनेछ । खेलकुदमा जीत हुनेछ । काममा व्यस्तता बढ्नाले व्यक्तिगत काम अधुरा रहनेछन् । साताको मध्यमा भने पारिवारिक कलह एवम् मनमुटावको योग देखिन्छ । सामान्य चोटपटक एवम् पारिवारिक स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने धनसम्पतिको कारोबार बढ्ने एवम् सुख सुविधामा मन जानेछ । फलाम धातुबाट धनको वृद्धि हुने र सवारी सुखको योग रहेको छ।